डिमर र रिमोट ट्रबलशुटिंग - मीडियालाइट बायस प्रकाश
डिमर र रिमोट ट्रबलशुटिंग
हामीले धेरै सामान्य समस्या निवारण चरणहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौँ जुन मितिर मुद्दाहरूलाई समाधान गर्दछ।
हामी क्षमाप्रार्थी छौं कि केहि प्रश्नहरू स्पष्ट प्रकारको देखिन्छन्, तर सबै चरणहरूमा प्रभावकारी समाधानहरूको क्रममा सूचीबद्ध छन्। अर्को शब्दहरुमा, पावर स्विच अन छैन वास्तव मा # 1 मुद्दा छ।
यदि यी मध्ये एक वा बढि समस्याहरूले समस्याको समाधान गरेनौं भने हामी तपाईंलाई प्रतिस्थापन टाढा र छिटो हामी अवरुद्ध गर्नेछौं।
१) पावर स्विच अन छ?
यदि हो भने, कृपया प्रकाशलाई केही सेकेन्ड भन्दा बढी दिनुहोस् पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिनुहोस्। कहिलेकाँहि पावर अप ढिलाइ हुन्छ जब बत्तीहरू नयाँ उपकरणमा प्लग हुन्छन्।
२) यदि तपाईं टिभी / मोनिटर / कम्प्युटरबाट पावर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, के उपकरण खोलिएको छ? धेरै उपकरणहरूले शक्ति प्रदान गर्दैन जब उपकरण बन्द हुन्छ (केहि गर्नुहोस्, र त्यो केहि अर्को समस्या हो)। जब USB पोर्टमा पावर छैन डिम्मरले काम गर्दैन।
)) डिम्मर जोडिएको छ? रिमोटको साथ स्थिर प्रतिरोधी बैगमा "एलईडी कन्ट्रोलर" डिम्मर हो। यो जोड्न आवश्यक छ। (रिमोटले कार्य गरिरहेको छैनको दोस्रो सामान्य कारण।)।
)) डिमरको बिचमा स्पष्ट रेखा छ? (के तपाईंले प्लेसमेन्ट गाईडिंगका साथ यो भिडियो देख्नुभयो??)
)) पावर स्रोत के हो र तपाईंले समावेश गरिएको एडेप्टर प्रयोग गर्न प्रयास गर्नु भएको छ? (प्रत्येक एकाइ तर Mk5 Eclipse मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक एडाप्टर समावेश छ)। यदि यो टिभी पावरसँग काम गर्दैन भने के यसले एडाप्टरसँग काम गर्दछ? अपर्याप्त शक्ति स्रोत प्रयोग भएको बेला धेरै समस्याहरू हुन्छन्। रिमाइन्डर: द्रुत चार्ज (अक्सर बिजुली बोल्टको साथ Q द्वारा चिन्हित) एडेप्टरले शक्ति (मॉड्यूल ब्याट्री चार्ज गर्न) मोड्युलेट गर्दछ। तिनीहरू फ्लिकर गर्न सक्दछन् र जोडिएको बेलामा रिमोट कन्ट्रोललाई खराबीमा पुर्‍याउन सक्छ।
)) कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले फरक शक्ति स्रोत प्रयोग गर्नुभयो (मोनिटर, टिभी, कम्प्युटर वा एडेप्टर बाहेक जुन तपाईं पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो)।
)) एडेप्टरमा पावर अन र प्लगिंग पछि, कृपया १ मिनेट कुर्नुहोस् र त्यसपछि समावेश गरिएको एडाप्टरमा जडान भएको बेला १० पटक अन / अफ बटन थिच्नुहोस्। के बत्तीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छ? कहिलेकाँही, प्रकाश पहिलो पटकको लागि पावरमा for सेकेन्ड सम्म लिन सक्दछ जब सम्मिलित एडाप्टरको प्रयोग गर्दा। यसलाई "पावर अप ढिलाइ" भनिन्छ र समावेशी एडाप्टरको प्रयोग गर्दा वा तपाईंको टिभीमा जडित हुँदा हुन सक्दछ। यो सामान्यतया तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गरेको पहिलो पटक मात्र हुन्छ वा यदि तपाईंले तिनीहरूको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुभएन भने।
यदि यी मुद्दाले तपाईंको रिमोट कन्ट्रोल समस्याहरूको समाधान गर्दैन भने, डिमर फ्राई हुन सक्छ र हामी प्रतिस्थापन पठाउनेछौं। च्याट मार्फत वा तलको सम्पर्क फारम मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कुनै पनि केसमा, डिमर्स5बर्ष सम्म कभर हुन्छ, त्यसैले यदि हामीलाई फेरि यस्तो भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्।
अन्तमा, कृपया मलाई तपाईंको अर्डर आईडी र ठेगाना मलाई दिनुहोस्। धन्यवाद! हामी अर्डर आईडी मार्फत मुद्दाहरू ट्र्याक गर्छौं कि क्या प्रवृत्तिहरू छन् कि कसरी हामीलाई भविष्यका मुद्दाहरू कसरी मिलाउने भनेर सिकाउन सकिन्छ र हामी कहिले पनि मान्दैनौं कि कोही अर्डर गरिएको छैन किनकि उनीहरूले आदेश दिएका छन्।